Chipindura High: Chikoro chepamusoro | Kwayedza
Chipindura High: Chikoro chepamusoro
06 Oct, 2017 - 00:10 2017-10-05T13:27:21+00:00 2017-10-06T00:01:00+00:00 0 Views
CHIKORO cheChipindura High School, icho chiri kuBindura, kuMashonaland Central, chakavandudzwa kuti chive chemhando yepamusoro munyika muno pamwe nemudunhu rose reSouthern Africa uye vadzidzi vepo vari kubudirira zvikuru mufundo yavo.
Vana veO-Level vepachikoro ichi vakawedzera kupasa nechikamu che33%.
Chipindura High inopa kutenda kukuru kumutungamiriri wenyika President Mugabe nekutsigira kwavari kuita chirongwa chekuvandudza dzidzo kuburikidza neNew Curriculum.
Chikoro ichi chakatotanga kufambisa chirongwa cheNew Curriculum sezvo chiine vadzidzi makumi maviri vatova nezvitambi zvekutyaira motokari uye varairidzi vatanhatu vari kutarisirawo kuwana zvitambi izvi munguva pfupi iri kutevera.
PaA-Level, vadzidzi vakapasa nechikamu che90% apo zvidzidzo zveScience zviri izvo zvakanyanya kupaswa.
Budiriro iyi iri kubva mukushanda nesimba kwevana nevadzidzisi.
Chikoro ichi chakakwikwidzawo mumakwishu eOld Mutual neBindura University of Science Education Olympiads.
Mumwe mudzidzi wepaChipindura High, Tanaka Majuru — uyo ari kuita zvidzidzo zveScience muUpper 6 — akadadisa zvichitevera kukunda kwaakaita vamwe vose munyika mumakwikwi ezvidzidzo zvemakombiyuta.
Pamitambo yenyika yose yeBUSE Olympiad, Nyasha Mudoti akatora nhamba yechina achiteverwa naTakudzwa Kararira wepaChipindura High zvakare.
Kuchikamu cheICT, chikoro chese chine masaisai edandemutande refibre Internet uye mwana mumwe nemumwe anenge aine kombiyuta yake yekusha- ndisa.
Chipindura High yakapindawo mumakwikwi eNASH Athletics National Competitions akaitirwa kuChinhoyi yakawana menduru 8 dzegoridhe, pamenduru 11 dzakahwinhwa nedunhu rose reMashonaland Cen- tral.
Chikoro ichi chinopa kutenda kuna Mary-joy Mudyiravanji nechikwata chake avo vakabatsira mukusimudzira Chipindura High pamwe nemureza weZimbabwe pavakanokwikwidza kunyika dzakadai seAlgeria, Brazil, Congo neZambia ndokuuya nemenduru.
Zvikoro zvapihwa midziyo yeICT14 Jun, 2022